अरुण सापकोटा आइतबार, जेठ ११, २०७७, १०:५२
काठमाडौं- लकडाउन अगाडिको सेयर कारोबारबाट ५० ब्रोकरले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बजारबाट उठाउन सकेका छैनन्। लक डाउन अगाडि दुई साताको अवधिमा सेयर खरिद गरेका अधिकांश लगानीकर्ताले पैसा तिर्न नसक्दा ब्रोकरहरुको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको रकम बजारमा फसेको ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए।
‘यकिन रुपमा कति उठ्न बाँकी छ तथ्यांक छैन। तर हरेक ब्रोकर कार्यालयको कारोबार रकमको आकार अनुसार ४/५ करोड रुपैयाँदेखि १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म उठ्न सकेको छैन।’
अनलाइन प्रणाली भनिएता पनि सेयर खरिद बिक्री पछिको पैसाको कारोबार भने अनलाइन हुन सकेको छैन। कतिपय ब्रोकरहरुले चिनजान तथा नियमित ग्राहकहरुलाई पैसाको लेनदेनमा खासै वास्ता गर्दैनन्। नियमित सेयर खरिद बिक्री गर्नेले खरिद गरेको सेयरको पैसा आफूसँग भएको अर्को कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दै नियमित रुपमा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्।
तर बजार नियमित रुपमा नचलेपछि सेयर खरिद गरेकाले बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पैसा तिर्नुपर्ने लगानीकर्ताले लक डाउनका कारण ब्रोकर कार्यालयमा जान सक्दैनन्। तर तपाईंको पैसा तिर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्दा अधिकांश लगानीकर्ताले लकडाउन छ आउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने गरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले जानकारी दिए।
ब्रोकरहरुले लकडाउन अवधिभर पैसा उठाउन सक्ने अवस्था छैन। तत्कालीन अवस्थामा लगानीकर्ताले पैसा नतिर्दा ब्रोकरहरु फस्ने अवस्था भने छैन। यदि सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता फर्केर नआए पनि उक्त सेयर ब्रोकरले बिक्री गर्न सक्ने अधिकार छ।
कतिपय ब्रोकरले २५ प्रतिशत पैसा लिएर सेयर किनाएका हुन्छन्। अग्रिम रुपमा २५ प्रतिशत लिनेहरुको लागि कुनै पनि जोखिम नभए पनि अन्यको हकमा भने केही जोखिम भने रहने एक ब्रोकरले बताए। उनले भने, ‘बजारबाट पैसा नउठ्दा जोखिमभन्दा यसको खर्च ब्रोकर इन्ड्रस्ट्रिले बेहोर्नुपरेको छ।‘
जति लामो समयसम्म लकडाउन लम्बिदै जान्छ, यस्तो खर्च बढ्दै जानेछ। अधिकांश ब्रोकरले बैंकबाट ‘ओडी’ चलाएका हुन्छन्। सुरुवाती अवस्थामा ब्रोकरहरुले समयमा पैसा भुक्तानी नगर्ने लगानीकर्ताहरुसँग प्रचलित ब्याज उठाउने प्रचलन थियो। तर नियमित कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न ब्रोकरहरुले केही समयका लागि वास्तै गर्दैनन्।
लगानीकर्तालाई आफैंले यस्तो सुविधाका पल्काउदा अहिले ठूला लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै लाभ लिइरहका छन्। ठूला लगानिकर्ता एकै जनाएको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त ग्राहकले यस्तो अवस्थामा पैसा तिर्नुभन्दा बरु बैंकमै उक्त पैसा होल्ड गरेर ब्याज पकाइरहेका छन्। उनीहरुलाई पैसा तिनुहोस भनेर ताकेता गर्दा अहिले म तिर्न सक्दिनँ बरु त्यही सेयर बेचिदिनु भनेर समस्यामा पार्ने गरेको एक ब्रोकरले दुखेसो पोखे।
बजार खुलेपछि उक्त सेयरको लाभ तथा नोक्सानी लगानीकर्ताले बहन गर्ने तर यसको प्रत्यक्ष भार भने ब्रोकरलाई पर्ने अर्को एक ब्रोकरले बताए। जसले सेयर बिक्री गरेका थिए, उनीहरु भने लकडाउनकै अवधिमै भए पनि पैसाको लागि ताकेता गरिरहेका थिए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैशाख ३० देखि बजार खुला गर्ने निर्देशन दिएपछि दुई दिन बजार खुल्यो। त्यतिबेला अधिकांश लगानीकर्ताले आफूले बिक्री गरेको पैसा लगेको एसोसिएसनका अध्यक्ष रानाभाटले जानकारी दिए। यस अवधिमा ५० वटा ब्रोकरले दुई अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको अनुमान गरिएको छ।
दुई दिन बजार खुला भए सँगै नेपाल सरकारले लकडाउन पुनः झन् कडाइ गर्‍यो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिन ननिस्कन निर्देशन दिएसँगै सेयर बजार चल्न सकेन। यस अवधिमा आफूसँग भएको केही नगद पनि भुक्तानी गर्नुपरेको तर बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा नउठ्दा समस्या परेको एक ब्रोकरले दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘आफूसँग भएको अलिअलि क्यास पनि भुक्तानी गरेर सकियो। अर्कोतर्फ उठ्नुपर्ने पैसा नउठ्दा ब्रोकरहरु समस्यामा छन्।’
लकडाउनपछि बजार खुल्दा केही दिन ब्रोकरहरुसँग क्यास फ्लो कम हुने र भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउने रानाभाट बताउँछन्।
ब्रोकरले भुक्तानी लिनुपर्ने रकमको ब्याजको कुरा नगरेको हुँदा कतिपय लगानीकर्ताले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि जानाजान नतिरेको रानाभाटले बताए। नियोजित रुपमा नतिर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि सेयर किनेर भुक्तानी गर्नेसँग र सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी पाउने दुवै पक्षलाई ढिलाइ हुने बित्तिकै ब्याज लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रानाभाट बताउँछन्। यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखेरै सुझाब दिइएको उनले जानकारी दिए।
कतिपय लगानीकर्ताले लकडाउन अगाडि सेयर बिक्री गरे बाहिर गएका छन्। उनीहरुले आफूले पाउनुपर्ने रकम पाउन सकेका छैनन्। उनीहरु पनि वास्तविक पीडित भएको हुँदा त्यस्ता लगानीकर्ताले पनि ब्याज पाउने गरि पोलिसी आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘जसले पैसा तिर्नुपर्ने छ, उसले पैसा नै दिनु नपर्ने साथै जसको पैसा हामीकोमा बसिरहेको छ, हामीले दिन नपाउने, यो त न्यायीक भएन नि।’
अहिलेको अवस्थामा मात्रै नभई भोलिका दिनमा पनि यस्तो समस्या रहिरहने भएकाले यसका लागि छुट्टै नियम आवश्यक परेको उनले जनाए।
किन बन्द छ शेयर बजार- अनुत्पादक क्षेत्र प्रमाणित गर्न?
कर्णाली प्रदेशले ल्यायो पौने ३४ अर्बको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति?
बेस्ट फाइनान्सको ६३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न सभाले आगामी आवका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नूका साथै सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरु क्रमशः अमिरध्... बिहीबार, असार १८, २०७७